पत्रकार हत्यारालाई मृत्युदण्ड – Everest Dainik – News from Nepal
पत्रकार हत्यारालाई मृत्युदण्ड
२०७४, २२ असार बिहीबार
असार २२ । श्रीलंकाको उच्च अदालतले पत्रकारका हत्यारालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । सन् २०१४ मा पत्रकार मेलिसी गुणसेखराको हत्या अभियोग लागेका अभियुक्त एन्टोनी रामसन जर्जलाई अन्तत मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो ।
विगत तीन वर्षदेखि चलेको मुद्दामा उच्च अदालतका न्यायाधीश पियासेना राणसिङ्घाले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएका हुन् ।
४० वर्षीय मेलिसी मेलको नामले चर्चित थिए । उनले लन्डनको इस्ट लन्डन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका थिए । स्थानीय ‘सन्डे टाइम्स’ नामक पत्रिकामा सम्पादकको रूपमा कार्यरत उनी एएफपीका लागि कोलम्बो संवाददातासमेत थिए ।
सन् २०१४ को फेब्रुअरी २ का दिन कोलम्बोमा रहेको आफ्नै घरमा उनको हत्या भएको थियो । उनी घरकै भान्सा कोठामा मृत भेटिएका थिए । हत्यारा ठानिएका व्यक्तिले पहिला उनकै घरमा रंग लगाउने काम गर्थे । पछि हत्याका लागि उनैलाई भाडामा लिइएको अनुमान गरिएको थियो । हत्यारा पहिचान भइसकेपछि सरकारी वकिलहरूले उनलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका थिए ।
घाम लागे पनि किन बढ्दैछ चिसो ?
प्रकाशको भावुक स्टाटसः ‘तेरो लागि साडी र सिन्दुर ल्याएको थिएँ, बिचमै किन छोडेर गयौं ?’
सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गर्दै सवोच्च अदालतमा रिट
न्यूजिल्याण्डविरुद्ध टस जितेर बलिङ गर्दै भारत, प्लेइङ ११ मा को–कोले पाए मौका?
आइपीएलः धोनीसहित सीएसकेका सबै खेलाडीको ‘स्यालरी’ (सूचीसहित)
२४ दिनदेखि काठमाडौं विश्वविद्यालयको पठनपाठन ठप्प
कांग्रेस विवादः समाधान गर्न बूढानीकण्ठमा छलफल जारी
आगो ताप्दै चियाको चुस्की लिँदै बाँदर